Kulan maanta ay yeesheen m/weyne Xasan Sheekh Maxamu'd iyo r/wasaare C/weli Shekh Axmed iyagoo kawada hadley qaabka iyo tirada ay noqon doonto xukuumadda soo socoto. M/weynaha iyo r/wasaaraha cusub ayaa ku heshiiyey in ay barlamaanka wada tagaan kadibna la soo dhiso xukuumad ka kooban 20 wasiir 20 w/kuxigeen 2 w/dawle...
Madaxweyne faroolle oo magacaabey gudi loogu yeerey gudiga xalinta khilaafaadka.
Madaxweynaha maamulka puntland ayaa magacaabey gudi uu ugu yeerey gudiga xalinta khilaafaadka,iyadoo leysu diyaarinayo in puntland yeelato m/weyne musharaxiin badanina ay diyaar u yihiin in ay xilkaas qabtaan. Dhanka kale musharaxiin kasoo horjeeda faroole ayaa qaadacey gudiga uu faroole ku dhawaaqey,waxeyna shir jaraa'id oo ay maanta qabteen ku sheegeen in...
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa maanta booqday dalka Jabuuti,isagoo la kulmay madaxda dalka Jabuuti, booqdayna saldhiga Mareykanku uu ku leeyahay dalka Jabuuti. John Kerry ayaa la kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhiggiisa dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, isagoo kala hadlay xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Jabuuti...
Dagaal ba'an oo aad u qaraar ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacey deegaano ka tirsan gobolka baay dagaalkaas oo u dhaxeeyey ciidamada Amisom iyo kuwa dawlada oo isku dhinac ah iyo dagaal yahanada xarakada Alshabaab. Dagaalka ayaa labada dhinac kawada sheegteen guulo wax ku ool ah,lamana oga...
Dagaal ka dhacey deegaanka dawlada soomaalida,ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay ku dhinteen in ka badan 60 qof kuwaas oo ah dad rayid ah. Ciidamada new policeka oo watey in ka badan sagaal tikniko ay oo ka kala yimid dhanka mustaxiil iyo qalaafe kuwaas oo laayey dadkaas rayidka ah,qaarkood...
Barlamaanka soomaaliya ayaa kalfadhigiisii 3'aad kulanka 51'aad ku guda galey aqrinta qaar kamid ah hindise sharciyeedyo ay soo gudbisey xukuumadii hore ee dr Cabdi Faarax Shirdoon. Barlamaanka ayaa inta badan wuxuu waqtiga ku luminayaa wax yaabo la dhihi karo daruuri maahan isagoo indha ka laabanaya waxyaabo saldhig u noqon kara...